Sooyaalka Taariikheed Ee OBAMA Iyo Safarkiisa Kenya… Qoraa Ustaad Asad Muuse Kibaar | FooreNews
Home Aragtida Dadweynaha Sooyaalka Taariikheed Ee OBAMA Iyo Safarkiisa Kenya… Qoraa Ustaad Asad Muuse Kibaar
Sooyaalka Taariikheed Ee OBAMA Iyo Safarkiisa Kenya… Qoraa Ustaad Asad Muuse Kibaar
BRACK OBAMA Waa Madaxweynihii 44-aad ee Mareykanka waana nin asal ahaan kasoo jeeda Dalka Kenya.
Waxaa dhalay Xuseen Obaama oo ka soo jeeda magaalada Nyangona, oo ku geeriyooday shil gaari 1982-kii (Gudaha Kenya)
Hooyadii [Ann Dunham] oo aheyd Gabadh Cadaan ah oo kasoo jeeda Magaalada Kuchita ee Gobolka Kansas ee Dalka Mareykanka.
Hooyadii iyo Aabihii waxay is guursadeen iyagoo dhigta jaamacad Hawai-university 1960-kii halkaa oo uu aabihii Vissa ku joogay.
Obaama wuxuu dhashay 04/08/1961 waxay hooyadii iyo aabihii kala tageen isagoo Afar Sano jir ah.
Hooyadii Sanad kadib waxay Guursatay Nin Muslim ah oo reer Indoneisiya oo la odhan jiray [Loloseotora] oo ahaa nin Ganacsade ah.
1965 ayaa hooyadii iyo odeygeegii cusbaa ee ay guursatay waxay uguureen dalka indonesiya iyagoo kaxeeystay Obama.
Tacliintii hoose wuxuu ka galay Magaalada [Jakaarta] ee dalka Indonesiya Iskuul ku yaala ilaa Toban Jirkiisii ayuu dhignayay.
Wixii ka dambeeyay 1971-kii wuxuu kusoo noqday Gobolka Hawai ee dalka mareykanka oo ay ayeeyadii Hooyo Deganeyd, wixii intaa ka dambeyay wuxuu ku sugnaa oo uu wax ku bartay dalka Mareykanka.
obaama mareykanka wuxuu kala-kulmay markuu yaraa dhibaatooyin iyo cunsuriyad,oo wuxuu lamid ahaa dadka madoow ee kunoolaa mareykanka.
arimahaa waxaa cadeeynayo 23/07/1995-kii warqad uu uqoray Obama walaalkii Maalik Abong oo ku nool dalka kenya , xiligaa oo uu Obama uu ahaa Qareen udooda dadka Madow ee Gobolka Chicago.
Warqadaa waxaa daabacay wargeyska [ Daily mail] wuxu walaalkii usheegay dhibaatooyinka haysta dadka madow ee Mareykanka iyo Dulmiga lagu hayo.
Waxa kale oouu usheegay Qaar Saaxiibadii kamid ah inay kula taliyeen inu utartamo Aqalka Sanetarka Mareykanka si uu ugu doodo xuquuqda Dadka Madoow, isna uu la qaatay arintaa.
Waxaad dareemeysaa Dalka Mareykanka oo isku sheega inuu yahay dalka ilaaliya xuquuqda bani aadamka, oo uu weliba Madaxweyne ka yahay nin madow oo kasoo jeeda afrika ilaa maanta waxaad arkeysaa in Askarta Cadaanka ah hadii ay dilaan Qof Madoow in aan waxba laga soo qaadeyn oo weliba Xeerarkii iyo Sharciyadii Hoos udhigayay dadka madoow weli aan waxba laga bedelin.
Al muhiim tiroba labo jer ayuu ku guuleystay Obaama Seneternimadii oo wuxuu kamid noqday Congresska Mareykanka wuxuuna noqday ninkii shanaad ee Madoow ee Seneter-ka noqda isagoo laga soo doortay Gobolka Chicago.
madaxweyne nimadana waxaa loo doortay 04/11/2008kii markii hore isagoo mar labaad-na ku guuleystay 2012kii.
Obama waa qoraa waxa lagu xusuustaa Buugiisii [Dreams of my father] himiladii aabahey oo uu kaga waramayay qoyskooga iyo buugiisii 2aad [Audacity of Hope] dhiiranaanta Rejada ee uu qoray 2006-kii.
Al Muhim hadaan Socodkiisan u gudbo, waxaa sababay Obama safarkiisaan uu ku tegay dalka kenya markuu arkay Shiinaha oo qabsaday Qaarada Afrika, Maalgelin badana ku sameeyay ayuu soo hambaaberay, dabadeetana wuxuu dareemay in Afrika ay gacanta Mareykanka ka baxday.
Qudbadii uu ka jeediyay shirka Ganacsiga ee Dalka Kenya ayaa wuxuu ku sheegay in Afrika Ay tahay Xudunta Dhaqaale ee Caalamka iyo inay Kenya Horumar weyn sameeysay Tobankii Sano ee ugu dambeeyay.ujeedadu waa dadka qaarada afrika ku nool,inlaxusuusiyo saaxibtinimadii ay -iska ilooween ee kala dhexeeysay dalka xuduud ahaan ka fog,wax-tarkiisuna ku yaryahay ee mareeykanka,
hadaba hadan wax-katilmaamo dalka shiinaha iyo xidhiidhka qaarada.
Shiinuhu waa wadanka ugu weyn Qaarada Aasiya waana wadanka 3aad ee Dunida ugu weyn, uguna dad badan.
Dadka shiinaha waxa lagu Qiyaasaa [1.3-Bilyan] oo qof.
Waxaa la sheegaa 1958-dii dalka Shiinaha in ay ka dhacday Abaar aad u adag oo ay ku dhinteen 58-Milyan oo qof oo shiine ah, Runtii wakhtigaasi Shiinuhu wuxuu ahaa Wadan Faqiir ah oo aan dhaqaalo laheyn, Arintaasi ayaa ku keentay dadka tiro intaa leeg inay u dhintaan bisaarad iyo daryeel la’aan.
Waxaa la sheegaa Madaxweynahoogii wakhtigaa inuu ku calaacalay oo uu yidhi (Dad badnideenii miyaan eersanay, kheeyraad yarideenii miyaa mushkilad inagu noqotay. ma dadka dunida ayaan ka duwan nahay, Ilaahay sidaan nooma doorin ee inagaa dadaali-weynay]
Waa khudbad ay oohin iyo calaacal ka buuxdo oo ku tusineyso dhibta ay soo mareen.
Markii u horeeysay ee Shiinuhu dhaqaalihiisa uu xor ka dhigo oo uu furfuro waxay aheyd 1978-dii markii Madaxweynihii Shiinaha ee Wakhtigaa [Dengxi a Oping] uu booqasho ku tegay dalka singabuur.
Wadankaas oo aad ugu horeeyay dalka shiinaha xaga Horumarka iyo Ganacsiga wuxuu kusoo arkay Ganacsi balaadhan iyo dhismo-yaal Waweyn oo Qurux badan.
Markii uu madaxweynaha shiinaha uu dalka ku soo noqday Ayuu joojiyay Nidaamkii hanti wadaaga ee diidi jiray inuu Qofku hanti yeesho, wuxuuna fasaxay inuu qofku xoolihiisa uu xor uyahay, iyo dhaqalaaha in la horumariyo , Taasi waxay keentay Shiinuhu inuu ku talaabsado Horumar xaga Dhaqaalaha.
Muddo Gudahooga ayuu shiinuhu ka sare maray Xaga dhaqaalaha Wadamada Talyaaniga iyo Faransiiska iyo Jarmalka.
Waxyaabihii Xoojiyay Xidhiidhka Maalgashi iyo Ganacsi ee Shiinaha iyo afrika waxaa kamid ah Shirweynihii [Beijing] oo uu Shiinuhu ku Marti qaaday 48-dowladood oo Afrikan ah.
Wuxuu shiinuhu ubalan qaatay Wadamada Afrika inuu Maalgelin ku sameeynayo Afrika, amaahana uu siinayo, Taas oo isku soo dhaweeysay Shiinaha iyo Qaarada Afrika.
Waxaa kale oo soo jiitay Qaarada Safaradii Madaxweynaha Shiinuhu ku kala bixiyay wadamo badan oo Qaarada kamid ah 30/01/2007 ilaa 20/02/2007 iyo Sida bilaa shuruuda ah ee Shiinuhu u maalgashanayo Qaarada.
Iyo Qodista Batoroolka oo uu ka wado Shiinaha Wadamo Badan oo Qaarada Kamid ah Sida Sudan, South Sudan, Naygeeriya iyo Wadamo kale.
Waxyaabahaas oo dhan waxaa wehliya badeecada iyo Qalab Electronic,ay isticmaasho oo uu Shiinuhu si hagar la’aan ah u keeno Qaarada iyadoo ku heleeysa qiimo jaban iyo soo dhoweyn-wanaagsan,sidaa aawadeed qaradu ma iloowi-doonto saaxibtinimada shiinaha…
Alla Mahad Leh..
Previous PostNinkii Daacish U Qaabilsanaa Qoor Goynta Jihadi John Oo La Sheegayo Inuu Ka Baxsaday Ururkaas. Next PostWariyaal katirsan Tv-ga Universal oo dhimasho iyo dhaawac uu kasoo gaadhay Weerarkii lagu qaaday Hotel Jaziira